Md. Madoobe oo loo kordhiyey wakhtiga uu magcaabayo Wasiirada iyo Baarlamanka oo la kordhiyey – Radio Daljir
Luulyo 12, 2013 6:24 b 0
Kismaayo, July 12- 2013- Xaruunta Jaamacada Magaalada Kismaayo maanta waxaa ka dhacay kulan balaaran oo ay ka qeyb galeen Ergadii soo doortay Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe, waxaana maanta kulankaasi laga soo saaray wakhti kordhin.
Kulanka maanta ka dhacay xaruunta Jaamacada ee Magaalada Kismaayo waxaa goob joog ka ahaa Madaxweyne ku xigeenka Jubbaland Gen. Cabdulaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag, wuxuu kulanka ka jeediyey hadal dheer oo uu ku dalbaday in la kordhiyo wakhtiga lagu soo xulayo golaha wasiirada, isagoo sheegay in loo baahan yahay in la helo dad aqoon leh oo xul ah.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ( Madoobe) ayaa horey waxaa jaanis loogu siiyey in uu golaha wasiirada ku soo dhiso wakhti 27 maalmood ah taasi oo ku ekeyd 10 bishan Julay, balse kulanka maanta ka dhacay Kismaayo ayaa waxaa aad looga dooday wakhtiga, iyo xubnaha la rabo in la soo xusho.
Ergadii dhistay Jubbaland oo dood dhexmartay ayaa kulankaasi ka dhacay Kismaayo maanta waxay ku ku iclaamiyeen in ay u kordhiyeen Madaxweyne Madoobe wakhtiga uu ku soo xulayo golihiisa wasiirada, iyagoo ku daray 30 maalmood oo hor leh, si loo soo xulo dad awood u leh shaqada ay qabanayaan.
Docda kale waxaa maanta la kordhiyey tirrada golaha xilibaanada ee Jubbaland kuwaasi oo markii hore la qoondeeyey in laga dhigo 65 xubnoo, balse haatan waxaa la ansixiyey in tirada laga dhigo 75 mudane, sidaasi waxaa Daljir u xaqiijiyey weriye Jaamac Joofane oo ku sugan Kismaayo isla markaasna kulanka joogay.
Maxkamada Isaanka midowga Yurub oo codsatay in aan la celin qaxooti Afrikaan oo ku sugan Malta